विश्वकप क्रिकेट २०१९ को लागि पाकिस्तानी टिमको घोषणा
इंग्लैंडमा आयोजना हुने विश्वकप क्रिकेट २०१९को लागि १५ सदस्यीय पाकिस्तानी टिमको घोषणा भएको छ । टिमको कप्तानी सरफराज अहमदले गर्नेछन् । पूर्व क्रिकेटर इन्जमामुल हकको अगुवाइमा भएको राष्ट्रिय छनौट समितिले १५ सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो । टिमका सदस्यहरु यस...
मुम्बईसँग दिल्ली पराजित
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद : राष्ट्रपतिबाट आज उद्घाटन गरिँदै
लोकसंवाद संवाददाता, बैशाख ५, २०७६
चेन्नईसँगको जितले हैदरावादलाई राहत
काठमाडौं । लगातार तीन खेलमा पराजय भोगेको सनराइजर्स हैदरावादले इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)अन्तर्गत बुधबार राती सम्पन्न खेलमा चेन्नई सुपर किंग्सलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ । चेन्नई दिएको १३३ रनको लक्ष्य हैदरावादले १६.५ ओभरमा चार विकेट गुमाएर पूरा गर्यो ।...
आइपिएल प्रिभ्यु :हैदरावादले शीर्ष स्थानको चेन्नईलाई रोक्न सक्ला ?
लोकसंवाद संवाददाता, बैशाख ४, २०७६
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)अन्तर्गत बुधबार राति सनराइजर्स हैदरावादले घरेलु मैदानमा चेन्नई सुपर किंग्ससँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछ । हैदरावादले पछिल्ला तीन खेलमा पराजय भोगेको छ । यस्तोमा के हैदरावाद चेन्नईसँगको खेलबाट पराजयको यात्रामा पूर्ण फर्किएला त ? तर, पछिल्ला चार...
पञ्जावसँग राजस्थान पराजित
काठमाडौं । कप्तान रविचन्द्र आश्विनले अलराउण्ड प्रदर्शन गरेपछि इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)अन्तर्गत मंगलबार राती सम्पन्न खेलमा किंग्स इलेभन पञ्जावले राजस्थान रोयल्सलाई १२ रनले पराजित गरेको छ । आश्विनले चार ओभरमा २४ रन खर्चेर दुई विकेट लिए । उनले राहुल त्रिपाटी...
१२ औं विश्वकपको लागि भारतीय टिमको घोषणा
लोकसंवाद संवाददाता, बैशाख २, २०७६
१२ औं विश्वकपको लागि भारतीय क्रिकेट बोर्डले टिमको घोषणा गरेको छ । भारतीय वरिष्ठ छनौट समितिले १५ सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो । टिममा कार्तिकले मौका पाएका छन् भने ऋषभ पन्त अटाएनन् । विकेट कीपिंगको अनुभवका कारण कार्तिक टिममा परेको...
रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर भर्सेस मुम्बई इण्डियन्स : मुम्बईको पलडा भारी
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) अन्तर्गत सोमबार राती रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर र मुम्बई इण्डियन्स प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । चालू आइपिएलका सात खेल खेलेको बैंग्लोरले एकमा मात्रै जित निकालेको छ । समान खेल खेलेको मुम्बईले भने चार खेलको नतिजा आफ्नो पक्षमा...
हैदरावादलाई हराएर दिल्ली दोस्रोमा
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)मा आइतबार राती सम्पन्न दोस्रो खेलमा दिल्ली क्यापिटलले सनराइजर्स हैदरावादलाई ३९ रनले पराजित गरेको छ । दिल्लीले दिएको १५६ रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदरावाद १८.५ ओभरमा ११६ रनमै अलआउट भयो । मध्यक्रम नचलेपछि हैदरावादले लक्ष्य पूरा...
चेन्नईसँग कोलकाता स्तब्ध
काठमाडौं । इमरान ताहिरको बलिङप्रेरित चेन्नई सुपर किंग्सले इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)मा आइतबार राती कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ५ विकेटले पराजित गरेको छ । चेन्नईले कोलकाताले दिएको १६२ रनको लक्ष्य १९.२ ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । टस हारेर ब्याटिङ...
हारको बदला लिने दाउमा कोलकाता, जित दोहोर्याउने मनस्थितिमा चेन्नई
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)अन्तर्गत आइतबार राती कोलकाताको इडन गार्डेन मैदानमा चेन्नई सुपर किंग्स र कोलकाता नाइट राइडर्स प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । चेन्नई कोलकातासँग जित दोहोयाउने दाउमा छ भने कोलकाता हारको बदला लिने दाउमा देखिन्छ । तर, दुवै टिमलाई खेल...
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)अन्तर्गत शनिबार राती सम्पन्न पहिलो खेलमा राजस्थान रोयल्सले दोस्रो जित दर्ता गरेको छ । उसले अंक तालिकामा तेस्रो स्थानमा रहेको मुम्बई इण्डियन्सलाई चार विकेटले हराएको हो । राजस्थानले मुम्बईले दिएको १८८ रनको लक्ष्य १९.३ ओभरमै...
आइपिएलमा बैंग्लोरको पहिलो जित
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)अन्तर्गत शनिबार राती सम्पन्न दोस्रो खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरले पहिलो जित दर्ता गरेको छ । कप्तान विराट कोहलीको ६७ र एबी डिभिलियर्सको ५९ रनको मद्दतमा बैंग्लोरले किंग्स इलेभन पञ्जावमाथि ८ विकेटले हराएको हो । ५३...
जितको खाता खोल्न सक्ला बैंग्लोर ?
लोकसंवाद संवाददाता, चैत्र ३०, २०७५
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)अन्तर्गत शनिबार राती रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरले किंग्स इलेभन पञ्जावको सामना गर्दैछ । चालू आइपिएलका ६ खेलमा जितविहीन रहेको बैंग्लोरले पञ्जावसँग जित निकाल्न सक्ला ? बैंग्लोरलाई पञ्जावसँग जित निकाल्न सहज भने छैन । उसले आजको खेल...
यू–१९ मा नेपालको शानदार जित
काठमाडौँ मलेसियामा भइरहेको यू१९ एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट एशिया छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले सिंगापुरलाई २१७ रनले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ। पहिले व्याटिङ गरेको नेपालले ४६ ओभरमा आफ्ना सबै विकेट गुमाउँदै २८२ रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रोहितकुमार...
दिल्लीले कोलकातालाई घरेलु मैदानमा हराउन सक्ला ?
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)अन्तर्गत शुक्रबार राति कोलकाताको इडन गार्डेन मैदानमा दिल्ली क्यापिटल र कोलकाता नाइट राइडर्स प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । चालू आइपिएलमा दुवै टिमले समान ६ खेल खेलेका छन् । कोलकाता ८ अंकसहित अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ भने...
धोनी र रायडु चम्किँदा चेन्नईको छैठौं जित
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)अन्तर्गत बिहीबार राती चेन्नई सुपर किंग्सले राजस्थान रोयल्सलाई चार विकेटले पराजित गरेको छ । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेर राजस्थान रोयल्सले सात विकेट गुमाएर १५१ रनको योगफल तयार पायो । उसका लागि सर्वाधिक बेन स्टोकले...
यसकारण प्रतिबन्ध लाग्यो पब्जी खेलमा
लोकसंवाद संवाददाता, चैत्र २८, २०७५
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले बालबालिकाहरुलाई मानिसक समस्या सृजना गरेको भन्दै पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय प्रहरी व्यूरो (सिआइबी) को अनुरोधमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । प्राधिकरणले बिहीबारै इन्टरनेट...
राजस्थानले चेन्नईलाई रोक्न सक्ला ?
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)अन्तर्गत बिहीबार राति राजस्थान रोयल्सले चेन्नई सुपर किंग्सको सामना गर्दैछ । घरेलु मैदानमा खेल्न लागेको राजस्थानले चेन्नईलाई रोक्न सक्ला त ? चेन्नई चालू आइपिएलको खेल नतिजाका आधारमा सबैभन्दा बलियो टोलि देखिएको छ । उसले अहिलेसम्म...
क्यारोन पोलार्डको आक्रामक ब्याटिङमा मुम्बई विजयी
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)अन्तर्गत बुधबार राति कप्तान क्यारोन पोलार्डले आक्रामक ब्याटिङ गरेपछि मुम्बई इण्डियन्सले किंग्स इलेभन पञ्जावलाई तीन विकेटले पराजित गरेको छ । पोलार्डले ३१ ब्लमा ८३ रनको आतिसी पारी खेलेपछि मुम्बई विजयी भएको हो । उनले ३...